Kordhinta aqoonta ajaaniibtu u leedahay fikir qiimeedka bulshada Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ylva Johansson (S), wasiirka suuqa shaqada oo shir jaraa'id ku qabaneeysa Rosenbad, xarunta madaxtooyada Sweden. sawir: Marko Säävälä/TT
Kordhinta aqoonta ajaaniibtu u leedahay fikir qiimeedka bulshada Sweden
Mowqifka dawladda ee howlaha ku wajaheeynta ajaaniibta ee bulshada
La cusbooneeyay tisdag 12 december 2017 kl 12.12
La daabacay tisdag 12 december 2017 kl 09.56
Dawladda Sweden ayaa ku talo jirta sidii lagu adkeeyn lahaa ku war-gelinta ajaaniibta dalka ku cusub aqoonta macluumaadka fikir qiimeedka bulshada Sweden (Svenska värderingar).
-Bulsho waliba waxay leedahay qaab hab-fikireed oo ay wax u qiimeeyso, waana kuwo ka muuqda xeerarka iyo habka bulshada loo maareeyo, sida ay sheegtay wasiirka suuqa shaqada Ylva Johansson. Iyadoo hadalkeedii sii wadatana sheegtay:
-Inay la tahay inaan ajaaniibta dalka ku dhaqan lagala xaajoon hab-fikireedka iyo sida ay bulshadu wax u qiimeeyso, hase yeeshee si toos ah loo wajaho xeerarka dalka ka jira. Markaa way adkaanaysaa in la fahmo, sida ay sheegtay.
Waxaa loo baahan yahay sidii dib u habeeyn loogu sameeyn lahaa macluumaadka jiheeynta bulshada - samhällsorienteringen. Fikirka ka dambeeya howshan ayaa ah sidii loo xoojin lahaa habka is dhex-galka iyo la qabsiga bulshada.
Maxey yihiin fikir qiimeedka bulshada ee aad ka hadleeysaa?
-Waxay ila tahay in si qoto dheer looga hadlo x uquuqda dhallaanka. Waayo waxey dhallaanku Sweden ku leeyihiin xuquuq qoto dheer ee shakhsi oo aanu waalidku ku xad gudbi karin. Tusaale ahaan in aanu waalidku awood u laheeyn inuu saameeyn ku yeesho macluumaadka uu dhallaanku ku baraneyo iskuullada.
-Waxaannu leenahey qoys ka kooban laba ruux oo labaduba shaqeeyaan oo masuuliyad ay ka saaran tahay masruufka qooyska. Waxaannu leenahey nidaam bulsho oo ku dhisan sinnaan. Waxaannu leenahay bulsho ay xuquuqda qofku ka xoog badan tahay midda qoyska.
-Waxaannu leenahey bulsho is aamin oo ku dhisan xuquuq iyo shuruudo qof walba saaran sidii uu uga qayb qaadan lahaa. Waxaa jira hab-fikirro bulshadeed noocaasi ah oo aasaas ah oo aan looga dhaqmin waddammadii ey ka yimaadeen ajaaniibta dalka ku cusub, loona baahan yahay sidii looga dhaadhicin ama loo ogeeysiin lahaa, sida ay sheegtay Ylva Johansson.
"Ma ahan in laga cabsado in laga wada xaajoodo hab-fikireedka ay maanta wax u qiimeeyso bulshada Sweden", sida ay war-geeyska Dagens Nyheter boggiisa doodda ku qortay wasiirka suuqa shaqada iyo meeleeynta dadyoowga dalka ku cusub Ylva Johansson (S).
Gaar ahaan waxaa laga hadleyaa sidii dib u shaandheeyn loogu sameeyn lahaa macluumaadka jiheeynta bulshada Samhällsorientering iyo sidii wax looga bedeli lahaa qalabka lagu barto macluumaadkaa. Iyo sidoo kale sidii macallimmiinta dhigta maaddadaa loo qalabeeyn lahaa.
Ylva Johansson ayaa maqaalkeeda ku sheegtay inaan Sweden laga helin hab qaabeey-san oo si joogto ah loo maareeyo ee qaabilaadda iyo meeleeynta ajaaniibta dalka ku cusub.
-Waxaa dhici karta in aan lacaadeey-san sidii arrimmahan miiska dushiisa loo saari lahaa oo looga hadli lahaa, sida ay wasiiraddu sheegtay.
"Howlaha arrimmahaa la xiriira ayaa inta badan lagu fuliyaa nidaam mashruuceey-san, dadyoow u gubanaya howlahaa iyo nasiib. Mana ahan howl looga baaraan degey mustaqbalka fog."
In loo dhigo waa mid, laakiin habkee ayaa lagu gaarin iney ajaaniibta dalka ku cusubi qaataan hab-fikireedyada bulshada?
-Khasab maahan in wax walba loo qaato sida ay tahay, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in la ixtiraamo xeerarka iyo hab-nololeedka ay bulshada Sweden dooratay mar haddii dalka la go’aansaday in lagu noolaado, sida ay sheegtay Ylva Johansson, wasiirka suuqa shaqada iyo meeleeynta oo u warrameeysay laanta idaacadda ee P1 Morgon.